Dhaleeceeynta UNCHR Iyo Amnesty ee Tarxiilka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhaleeceeynta UNCHR Iyo Amnesty ee Tarxiilka
Uppdaterat fredag 19 januari 2001 kl 12.00
Publicerat onsdag 19 januari 2011 kl 11.47
Maxkamadda ayaa indho ka duwan ku eegtay dhaleeceeyntii laanta qaxootiga UNHCR ee hayadda Qaramada Midoowday ku dhaleeceeysay tarxiilka khasabka dalkani ugu celiyo ciraaqiyiinta, iyadoona sabab looga dhiganayo dalka Ciraaq oo caqabadihii ka aloosnaa ey yaraadeen.
Waana fal ay dhaleeceeyn dusha uga tuureen hayadaha UNHCR iyo hayadda u doodda xuquuqda bani’aadamka ee amnesty International.
Madeleine Seidlitz sarkaalad ka hoowl-gasha hayadda Amnesty International laanteeda Iswiidhen:
- Waxaa ka cudur daaranaynaa in maxkamaddu wax ka badashay fikirkii ay horay u qabtay, iyadoonana aanay noo muuqan in xaaladda Ciraaq wax iska badaleen.
Waa is-bedel socday illaa xilligii dayrta, iyadoona wixii muddadaa ka dambeeyay ay maxkamaddu ka dalbatay in hayaddaha iswiidhishku soo gudbiyaan fikirkooda iyo midka waddammada xubnaha ka ah ururka EU-da ee la xiriira xaaladda dalka ciraaq.
Hayadda Amnesty iyo heyado kale ayaa gacan ka geeystey sidii ciraaqiyiinta diidmada haysta abiil ugu gudbin lahaayeen maxkamadda EU-da iyadoona 3000 ee ka mid ah ciraaqiyiinta tarxiilka lagu war-geliyay ey
2500 ka mid ah loo suurta-geliyey in dacwooyinkooda loo gudbiyo maxkamadda. Maxkamadda ayaa dib u eegtay abiillo gaaraya 272 oo marka laga reebo lix ka mid ahi intooda kale diidmo heleen.
Waxay iminka u muuqataa in su’aashaa meel looga soo haray maadaama maxkamadda EU-du tahay hayadda ugu sarreeysa ee go’aanka ka gaari lahayd, hase yeeshee Amnesty laanteeda iswiidhen waxay weli ku andacooneeysaa in tarxiilladaa la joojiyo, sida ay sheegtay Madeleine Seidlitz.
- Waa mid aan ka war-qabno, mana aha inaan indhaha ka qabsano xaqiiqda in qaar badan qaxootigaa khasab loogu celiyay dalkoodii hooyo ey dib qax u soo geli doonaan.